विष्णु पौडेलले देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न सक्दैनन : अर्थविद् (भिडियो सहित) – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
विष्णु पौडेलले देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न सक्दैनन : अर्थविद् (भिडियो सहित)
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदमा जिम्मेवारी हेरफेरसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् । पौडेल यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तत्कालीन् अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको बर्हिगमनसँगै रिक्त स्थानमा ओलीले आफू निकटका पौडेललाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएसंगै देशको अर्थतन्त्रको विकास गर्नमा रहेको चुनौतीबाट छुटकारा दिलाउन समेत नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्भित्रको वरीयतामा विष्णुप्रसाद पौडेल चौथो स्थानमा रहेका व्यक्ती हुन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीपछिको शक्तिशाली मन्त्रीको रूपमा उनले काम गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अति निकटस्थ नेतालाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिदै आएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा दोस्रो व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दा ओलीले त्यसैलाई दोहो¥याएका छन् । तत्कालीन् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा पौडेललाई शक्तिशाली महासचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । पौडेल दोस्रोपटक अर्थमन्त्री नियुक्त हुँदा अर्थतन्त्रको अबस्था जटिल रहेको अवस्थामा रहेको छ । अर्थबीद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीले अर्थमन्त्रीले ज्ञान, विवेक र अनुभबका साथै बढीभन्दाबढी छलफल गरेर अर्थतन्त्रलाई उच्च बनाउने तर्फ लाग्र्न सुझाब दिएका छन् ।
अघिल्लोपटक उनले यो जिम्मेवारी सम्हाल्दा २०७२ सालको भूकम्प गएको ६ महिना मात्रै भएको थियो । यसपटक कोरोना भाइरसका कारण नेपालमात्र नभइ विश्व अर्थतन्त्र धर्मराएको छ । लामो लकडाउनको गम्भीर नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ । पौडेल पहिलोपटक अर्थमन्त्री भएको वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ० दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको थियो । भूकम्पका कारण वार्षिक करिब डेढ खर्ब रूपैयाँको दायित्व सरकारमाथि थपिएको थियो । तर उनले त्यतिनै बेला केही लोकप्रिय निर्णय गरेर बाहिरिएका थिए । पौडेलले त्यतिबेला सबै सांसदहरूलाई दिइने १५ लाख रूपैयाँ बराबरको निर्वाचन विकास कार्यक्रम बढाएर ५० लाख बनाइदिए । त्यसका अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको आकार बढाएर ३ करोड बनाए । त्यसअघि १ करोड रूपैयाँको यो कार्यक्रमको बजेट पौडेलले बढाएका थिए । पौडेलले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाइदिए । नेकपा एमाले समर्थक युनियनलाई निर्वाचनमा सहयोग पुग्ने गरी उच्च दरमा कर्मचारीको तलब बढाएको आरोप उनीमाथि लाग्यो । त्यतिबेला राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा जानबाट रोकेर आफू अर्थमन्त्री बन्न पौडेलले नै ‘गेम डिजाइन’ गरेको अनुमान गरेका थिए ।
अहिले पौडेल अर्थमन्त्री हुनुलाई संयोग मात्रै हुन नसक्ने उनीहरूको टिप्पणी रहेको छ । अर्थविदका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र इतिहासकै बढ्ता संकटपूर्ण घडीमा रहेको जनाएका छन् । सरकारले नियमित खर्च जुटाउन लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । महामारीका कारण आर्थिक गतिविधिहरु सुस्त छन् । ब्यापार व्यवसायमा महामारीको त्रास मात्रै हैन, सोझो मार छ । सरकारलाई ठूलो आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ देशभित्र रोजगारीको संकट छ । विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किनेहरु बढिरहेका छन् । विदामा आएकाबाहेकलाई श्रम गन्तब्य मुलुकले रोजगारीमा लिएका छैनन् । अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीले महामारीले उद्यम गरिरहेकाहरुलाई राज्यले उचित संरक्षण दिन सकेको छैन । सरकारले लिएका अर्थनीतिहरु राजस्वमुखी मात्रै हुँदा अर्थतन्त्रका अवयवहरुले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । देशको आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिएको अबस्थामा सवैलाई बचाएर अर्थतन्त्रको विकास गर्नु ठूलो चुनौती रहेको बताए । अर्थमन्त्रीका अर्का आकांक्षी सुरेन्द्र पाण्डे बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खेमाका भएका कारण उनलाई प्रधानमन्त्रीले विश्वास नगर्ने र अर्को बलियो दाबेदार नि नभएकाले आफू एक्लो विकल्प नरहेकाले उनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको धेरैको अनुमान रहेको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडलमाथी प्रदेशको सदरमुकामसँग मन्त्री पद साटेको आरोप समेत लागेको छ । पौडेलले गत निर्वाचनमा बुटवल राजधानी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर त्यसो भएन ।
राजधानी बुटवलबाट भालुवाङ स¥यो, पौडेल मौन बसे । त्यतिबेला नै पौडेलले अर्थमन्त्रीका लागि राजधानी साटेको टिप्पणी नेकपाकै नेताहरूले गरेका थिए । तत्कालीन् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर प्रशासनदेखि खर्च प्रशासनसम्म सुधारको थालनी गरेका थिए । खतिवडाले सुरु गरेका सुधार निजी क्षेत्रले रुचाएको थिएन । ठेक्कामा ५० प्रतिशत अग्रिम मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टीदेखि अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बरको नीति उनले कार्यान्वयन गराए । पौडेल गणतन्त्र नेपालको पहिलो संयुक्त सरकारका जलश्रोत मन्त्री भएका थिए । देशको खातापाता सञ्चालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै गर्दा पौडेलमाथि बजेटको कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छ । खतिवडाले ल्याएको बजेट आलोचित छ । देशी विदेशी दाता, लगानीकर्ता, साझेदारहरुसँग उठबसमा रहनुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको पढाइ भने माध्यमिक तहसम्म मात्रै छ । २०५१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत भइसकेका पौडेल २०५३ सालमा युवा खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री भएका थिए । देवीलाल र रेवती पौडेलका छोरा विष्णुप्रसाद पौडेलको जन्म २०१६ साल मंसिर ५ गते स्याङ्जाको पुतलीबजार–१३ मा भएको हो । (भिडियो साभार: प्राइम टाइम्स टिभी)